वि.सं. २०७६ जेठ महिनाको राशिफल - Enepalese.com
वि.सं. २०७६ जेठ महिनाको राशिफल
इनेप्लिज २०७६ वैशाख ३० गते २२:०५ मा प्रकाशित
जेठ महिनामा ग्रहराज सूय वृष राशिमा विचरण गर्ने छन् । यसै गरी बुध पनि २ गतेबाट १८ गतेसम्म वृषमा र त्यस पछि मिथुनमा । मङ्गल र राहु मिथुनमा रहेका छन् । शुक्र मेषमा २० गतेबाट वृषमा जाने छन् । ८ गतेसम्म गुरु बृहस्पति धनुमा रहने छन् भने त्यसपछि वृश्चिक राशिमा फर्कने छन् । शनि र केतु धनु राशिमा रहेका छन् । बृहस्पति र शनि बक्र गतिमा छन् । अस्त रहेको बुध १८ गते पश्चिमबाट उदय हुनेछन् ।
यस प्रकारको ग्रहगोचरको अवस्थाले प्रत्येक राशिलाई दिनसक्ने फलको बारेमा आँकलन गरी प्रस्तुत छ जेठ महिनाको राशिफल । हेरेर लाभ लिनु होला ।